Iimaski zobumba ngenxa yobomi ekhaya, zokupheka. Imaski eyenziwe ngobumba obomvu ebusweni
Ubumnandi kulula: iimaski zokuzicoca ezenziwe ngobumba obomvu
Ukubulala njengento eyintloko yamaski e-cosmetic ithandwa kakhulu yiingcali ezininzi ezisemgangathweni lobuhle bebala kunye nempilo. Namhlanje siza kubelana nawe ngemaski esebenzayo esekelwe ngobumba obomvu. Olu hlobo lobumba oludongwe lucebile kwizinto ezimbiwa ngamaminerali, luncedo kulusu. Kwaye izinto ezinjengobisi, i-kefir, i-honey, i-oatmeal kunye nekhukhamba, zinefuthe elinomsoco, oluqinisayo nokuhlambulula.
Ubumba obuthathaka obumbulu obomvu
Ikhetho lokuqala lidongwe, i-yolk, ubusi. Ezi zixhobo zondla ngokugqibeleleyo, zinyusa, zikhupha isikhumba ngefilimu ye-vitamin engcono, ngenxa yoko uya kuba nekhwalithi ephazamisayo. Izithako zifakwa kwisantya esifanayo, zihluthise ngobisi oluncinane.
Imiski yokubuyisela isikhumba esikhanyayo
Inketho yesibini ibumba, i-oatmeal, ubisi. I-Oatmeal ihlambulule ngokucokisekileyo isikhumba, ivule ngokukhusela kunye nesondlo esinomsoco, ngokudibanisa nobumba obunobumba, isebenza kangangoko. Isiphumo sisisitye esicocekileyo kwaye sivuthayo. Izithako ezomileyo zihlambela ngobisi olufudumele ngokuvumelana kwe-gruel.
Ukuhlaziya imaski yobumba kunye nomphumo wokuphakamisa
Inketho yesithathu ibumba kunye nekhukhamba. Ikhukhamba entsha "inhleko" kungekhona nje isisu, kodwa kunye nekhanda lobuso kunye ne-decollete. Ijishi lekhukhamba linokuphakamisa ukukhanya. Abanye abacebisi bacebisa ukuba nje basula ubuso bejikisi. Kungenzeka ukwenza kuyo kunye ne-tonic ye-cosmetic tonic . Kodwa ngokudibanisa nobumba, i-mask eqinisa kunye neyokuhlaziya iyayifumana.
I-recipe yemaski yokulala yesikhumba seengxaki
Inketho yesine yodongwe kunye ne-kefir. Udongwe luyakwazi ukuthoba ukungcola kunye neoli. I-Kefir ngokudibanisa nobumba wodongwe kuya kunceda uncedo lwengxaki yesikhumba, ukususa ubomvu obungadingekile, amachashaza amnyama, kuya kwenza ukuba kubonakale. Hlanganisa nje izithako.
Imigaqo yokusetyenziswa kweemaski zobumba
Fihla iinwele zakho phantsi kwekhenkethi yokuzicoca okanye ihekhi ukuze bangahlambuluki.
Ngaphambi kokuba usebenzise i-mask ebumbini, kufuneka uhlambulule ubuso kunye nokugqithisa ngobisi lwe-cosmetic okanye i-gel yokuhlamba. Ukucoceka kwesikhumba kunokufumana izondlo ezingaphezulu.
Faka isicelo semaski kunye ne-spatula ekhethekileyo yeplanga okanye ibrashi ekhemayo. Faka udongwe ngokubanzi ngangokunokwenzeka.
Shiya umsiki ngaphandle kwedongwe imizuzu eyi-15-20. Ngeli xesha, kungcono ukulala phantsi nokuphumla, ukuphosa intloko yakho emva koko.
Geza imaski yobumba ngamanzi apholileyo
Ukuhlambulula ubuso kwansuku zonke
Masks ukulwa neenyawo zeenyawo ezungeze amehlo
Ukubuyisela iiOyile ezibalulekileyo
Iimaski zesikhumba esibuhlungu
Ukukhawuleza kwengxaki yemfundo eyahlukileyo yabafana kunye namantombazana
Izifo zabasetyhini abakhulelweyo, eziyingozi kumntwana
I-trailer yokuqala yefilimu kunye noDanila Kozlovsky "iCrew" yakhululwa
Iyintoni inzuzo ye-ultrasonic massage?
I-Psychology yokuziphatha komntu ekujonganeni nabasetyhini
Ukuthintela umkhuhlane kunye namaqanda
Ukutshatyalaliswa komdaniso - isondo kunye nobuntombi kwibhotile enye
Iipancakes kunye nokuzaliswa kwe-strawberry
Umdabu oMama uMary
Amazambane ahlambulukileyo kunye nenyama enqabileyo
Ikhabethe yomfazi omnandi
Indlela yokupheka i-feijoa: iindlela zokupheka ezingcono kunye nesithombe
I-chic yaseBhitshi: ukwakheka kwindlela yaseBalmain